Fa mihamafy ny fiainana ;
Tsy mitsahatra miaka-bidy,
Ny akora fototra iainana.
Ny fotoana koa ity, toa fohy,
Tsy mba misy isaintsainana ;
Hany hery dia ny milefitra,
Mijery fotoana kely hisainana.
Tampotampoka eo anefa,
Dia misy ny manararaotra ;
Manentanentana ny olona,
Mambosy azy mba hitroatra.
Raha ny zava-misy tokoa,
Tena latsaka ambany loatra ;
Na aiza, na aiza no aleha,
Efa miaina ambany foitra.
Mahamenatra ihany ny mandre,
Sy mahita an-tambazotra ireny,
Fa i Madagasikara anie hono,
Tena mahantra, ary novoleny ;
Mety ho novolen’iza ary anefa,
Hoy ireo rehetra izay miteny ;
Novolen’ireo fahavalo anatiny,
Manao varoboba ny Fireneny.
Koa mahatsiarova tena, mijoroa,
Mba mihenjàna toy ny hasy ;
Ny fandrosoana izany tsy hisy,
Fa hangaina eo, ary hangasihasy.
Misikina ny fahasahiana, hijoro,
Hihoitra, ary koa mba tena hihafy ;
Dia hinoana fa hirehareha ianao,
Fa izaho dia tena MALAGASY.